Saxardiid: Ololahiisii Xildhibaannimo | Doodwadaag waa Danwadaag.
Saxardiid, waxa uu joogaa Muqdisho, hammigiisa waxa uu ahaa in uu noqdo Xildhibaan. Waxa uu haaystaa dhalashada mid ka mid ah waddamada Galbeedka, isaga oo ka baxay jaamacad qaayo ka leh dalkaa, una dheertahay khibrad aan loo babac dhigi karin oo dhanka maamulka dowladnimo ah.
Waxa uu aaminsanaa in haddii uu dalka gaaro uu wax badan qaban karo…waa sida uu ku sheekaystay, waa un sheekadaa se. Waxaa kale, oo uu aaminsanaa in dadka hadda dalka ka shaqaynaya ay wada yahiin ma gudbayaal aan waxba loo dhiiban…..
Dhanka kale, Saraxdiid, waxa uu caan ka yahay guri walba oo Af Soomaali looga hadlo, isaga oo had iyo gooraale fadhi joogta ah ku lahaa taleefishinnada Soomaalida…. Waxaa lagu xasuustaa-isaga oo doobbo-dhabanaya… dhaliil aan dhamaanayn, eedayn aan loo meel dayin, canbaarayn aan ujeeddo lahayn iyo gantaallo cay ah oo uu u qaybsho dadka uu maqlay in ay maalin ka soo shaqeeyeen dalka….Sidaa datreed, Saxardiid, waa nin ka kasbaday shacabka Soomaaliyeed jacayl iyo waynayn.
Saxardiid, Moqdisho ayuu joogay dhowr cisho, wuu daahsan yahay, uma bannaana waxaan ka ahayn in uu ololahii oo horay ka sii billaabo. Talow sidee ayuu u billaabayaa? Xaguu se ka billaabayaa?
Saxardiid, waa nin isku filan qofna tashni uguma laaban, waxa uu markiiba isku baaciyay halkii uu awoodda ku malaynayay.. Waa tolkii uu ka dhashay. Waxaa kulankii soo xaadiray Nabaddoon Reerka, Aqoonyahan Reerka, Waddanigii Reerka, (haa, waddanigii) Wadaadkii Reerka, Ganacsadahii Reerka iyo dabcan Dagaal-oogahii Reerka.
Isla markiiba Saxardiid, waxaa roobka looga dhigay waydiimo ay ku dheehan yahiin xanaaq iyo ka eed sheegasho…Talow, maxuu galabsaday….kolba way inoo caddahay, haddii aan iska yeelayn…..Maxaad qabiilka u qabatay intii aad maqnayd?, Dagaalkii aan la galnay qabiil hebel waxaa na loo sheegay in aadan muujin wax nashaad ah, sabab?. Iskoolkii qabiilka kama aadan qayb qaadan…Waa lagu ogyahay inaad gaalgaal iska dhigaysay oo aad tolkii kula joogay waddanka aad ka timid xitaa aad goysay…Maxaad naga soo doontay?!.
Dagaal-oogahii, ayaa qamaamayo iyo Afka burus ka sii daynayo!!!…
Saxardiid, waxa uu isku dayay in uu beesha dajiyo, balse, marka uu isku dayo in uu dajiyaba circa ayay qaylada isku sii shareertaa…waa sidaa oo biyo lagu dhibcin!!
Waxa uu codsaday in ay qaylada la dhaafo ama almiino-haddii aan la dhaafayn- la yareeyo, ayna mid mid u hadlaan. “Howraar san”
Waxaa ku hormaray Nabaddoonkii.
Nabaddoon: Saxardiidow, maandhow, intaas ayaad naga maqnayde, maxaa tolka ku soo kordhisay…
Saxardiid: Anigaa..Aniga…Iyaa..Anigaa “Ayuu ku antataray”.
Nabaddoonkii inta uu qoslay ayuu hadalkii isaga baxay.
Wadaadkii: Cilmiga aad soo baratay, hadduu sharci ilaah ahayn waa hal bacaad lagu lisay, gaalada ula laabo. Anaga Sharciga Alle baan rabnaa in na lagu dhaqee.. “oo Hadda ma sharci Alle, ayuu goobta ku fadhiyaa?”!!.
Ganacsadahii: Shirkaddii Reerka lahaayeen, waa adigii diiday inaad lacag ku darsato…halkaan wax kuu yaallo ma laha, Reerkana waxaa u sharraxan Hebe oo Shirkadda ku leh hantida ugu badan!!..
Dagaal-oogahii: Nin gun ah baad tahay, wiilasha beesha oo xabadkooda qaawan u dhigay xabbadaha reer hebel, soo adigii diiday inaad lacag u soo dirto…Soo adigii-xitaa diiday inaad muslimiinta dalkaas joogo sadaqada Masaajidda laga bixiyo aad nooga soo aruuriso…. Cumar Faagas ayaa kaa fiicnaa, inta uu Masaajidka Xaafadda tagay ayuu ku yiri: “Soomaaliya ayaa lagu baaba’ay gaajo”..Waxa uu noo soo helay, oo uu noo diray dhowr kun. Tuug baa tahaye meesha ka tag, inta aan kugu dalban ma naxayaasha qabiilka.
Aqoonyahankii: Waa kuu jeedaa inaad dawakhsan tahay, kolayba hay’ad ama mashruuc wax lagu cuno ma noo waddaa…Aniga waxaan aad u aqaannaa sida hay’adaha lacag looga sameeyo maalmo gudahood..Haddii kale, walaalow, hayna daalin!!.
Saxardiid, Waa cusub ayaa u barayay…Waxa uu toos u codsaday in loo ga qabto dayaaradda kursigii noqoshada. Talow, ma noqosha aan soo laabasho lahayn baa ama waa mid kale!!